Oromo Language Information from Emergency Management - Emergency Management | seattle.gov
Mana kee fi maatii kee qopheessi
Balaan yeroo tasaa quunnamuu danda'a. Kanaaf dursa qophaa'uun atii fi maatiin kee wal baraaruun barbaachisaa dha. Namni kamiyyuu gochaalee kanneen sadan kana gochuun garaagarummaa uumuun ni danda'ama. ·
Karoorsuu - Yeroo balaan gahu maatiin hundi waliin jiraachuu waan hin malleef bakka nagaa qabeessa deemuuf dura karoorfachuun barbaachisaa dha; kunis akkamiin wal quunnamuun akka danda'amuu fi balaa booda eessatti akka wal argitan baruuf barbaachisaa dha.
Kiitii qopheessuu - Balaa irraa of qolachuuf waan barbaachisu hundaa qopheeffachuu. Yoo xiqqaate bishaan, soorata, baatirii ifaa, uffata dabalataa fi ho'a gahaa argachuuf uffata galgalaa, gogaa fi kiitii gargaarsa duraa barbaachisa.
Wal gargaaruu - Hiriyootaa fi ollaa kee waliin ta'uun wal gargaaruu Liinkiin armaan gadii yeroo balaa maatii keetiif of qopheessuu irratti odeeffannoo dabalataa ni kennu.
BULCHIINSA BALAA IRRAA ODEEFFANNOO AFAAN OROMOON KENNAME.
Bakka bilbilaan gahamuun ala (Out of Area Phone Contact)
Yeroo kirkira lafaa of baraaruu (How to be Safe in an Earthquake)
Yeroo balaa maal gochuu: Karoora yeroo balaa maatii fi kiitii yeroo balaa (What to do in an Emergency: Family Emergency Plan and Emergency Kit)
Tarree waadaa qophaa'inaa (Preparedness Promise List)
Yeroo balaaf bishaan kuufachuu - Liitiraan (Store Emergency Water for Disasters - Liters)
Yeroo balaaf bishaan kuufachuu - Gaaloons (Store Emergency Water for Disasters - Gallons)
Kitaaba halluu kirkira lafaa bilisaa (Quakesafe Coloring Book)
Kaarboon Moonoo Oksaayidii (Carbon Monoxide)